Incazelo yokuhamba: Ekusetshenzisweni kwe-intanethi, indlela yokuhambisa iphakethe lwazi oluvela emthonjeni kuya emgomweni. #Ukuhamba ngokuvamile kusetshenziswa igajethi ezinikele ngokuthi inkinobho. Ukuhamba phambili kuyisici esiyinhloko se-Intanethi kusukela kunika amandla imilayezo ukuthi iqale ngePC eyodwa bese uhamba ngokulandelayo futhi ngokuhamba kwesikhathi ufeze umshini wenhloso. Wonke umuntu ophakathi we-PC wenza isimiso ngokuhamba nomlayezo ku-PC elandelayo. Ingxenye ethile yale nqubo ihlanganisa ukuhlaziya i-tableto yokuhlela ngokunquma indlela engcono kakhulu.
Ukuhamba ngokuphindaphindiwe kuphutha ngokubhukuda, okudlala umsebenzi wokuqhathanisa. Ukuhlukaniswa okubalulekile phakathi kwalaba ababili ukuthi ukubhoboza kwenzeka ezingeni eliphansi futhi ngemuva kwalokho kube nokusebenza okukhulu kwemishini nakuba ukujikeleza kwenzeka ngenani eliphakeme kakhulu lapho ingxenye yomkhiqizo ibaluleke kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yezizathu zokuthi ukujikeleza kwenzeka ngesamba esikhulu, kungenza ukuhlolwa okuphazamisayo okuningi ukunquma indlela ekahle yepakethe.